IN-Housing Manufacturer kuti USB C nomusimboti, Type C wire, Wireless mundiro Mobile uye kombiyuta nenhumbi.
hombe vachitengesamo nokuti wholesales, reselles, muchiso vanowatengesa etc. iripo exclusvie magadzirirwo chete yokutengesa yenyu.
Zvacho uye Delivery
1 zuva vanotumira kuti zvose zvinowanikwa kutumirwa keriya mikana. kuwedzera turnover mari.
SERVICE AND garandi
Tiri pano kuti nemwi 24 * 7 basa pakarepo, 12 mwedzi garandi mwero izvo chakaremara asingasviki 0.3%.
Kudyidzana kunotanga yepamusoro zvigadzirwa
Wedzerai-ukoshi kunotanga hanya basa
ONE-MIRA MHINDURO PROVIDER
Sales Our Team
Kana muchiita zvokutengeserana bhizimisi China nokutengesa, vakanga iwe nguva dzose kuramba kumirira avo nokukurumidza mhinduro kusvikira agumbukira yako? Ko chirongwa chako kurasikirwa nokuda kuchakunda MOQ pamwe OEM / ODM Service?
Kana pano munhu rokutengesa chikwata mairi kupa 24 * 7 basa pakarepo kumusika anopupurira inopisa kutengesa chete design USB C hubs vauye kwauri mbiri varikumahombekombe muna 2019, kuti iwe tora 1 Maminitsi yokutaura uye kukurukura zvedu warmful Sales chikwata?
Tiri pano kuti nemwi 24 * 7 Mhinduro pakarepo.
Innovation rinotanga mafungiro matsva
U40 Dark kumar 8 muna 1 USB C nomusimboti